Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miatrika fameperana fitsangatsanganana vaovao ho an'i Hawaii ireo mpitsidika
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Safety • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana sy fizahan-tany be indrindra any Etazonia ny Hawaii, fantatra amin'ny anarana hoe Aloha Fanjakana. Manakaiky ny 30,000 ny fahatongavana isan'andro, trano fandraisam-bahiny feno ary ny aretina COVID-19 dia miparitaka tsy mbola nisy toy izany.
Fepetra fitsangatsanganana vaovao ho an'i Hawaii (nohavaozina)
Hawaii dia nandalo ny mararin'ny COVID betsaka indrindra hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ity isa ambony ity dia manala baraka ny 60.8% amin'ny mponina ao amin'ny Fanjakana vita vaksiny tanteraka.
Ny isan'ny mpitsidika an-trano dia tonga isan'andro ao amin'ny Aloha Fanjakana, mitazona trano fandraisam-bahiny, fivarotana ary trano fisakafoanana feno.
Fa maninona no olona maro no te hitsidika an'i Hawaii? Na ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii aza tsy mahalala ary mangina, manandrana mitady fomba hanakiviana ny mpizahatany handeha any Aloha Fanjakana.
CNy tahan'ny aretina OVID amin'izao fotoana izao tsy voafehy intsony ao amin'ny fanjakana amerikanina Hawaii - ary mampatahotra izany.
"Tena mila mampihena ny fanisana ataontsika isika ankehitriny amin'ny alàlan'ny Andron'ny Asa, raha tsy izany dia misy ny ainy tsy misy ilaina sy mampivarahontsana," hoy i Green tao amin'ny lahatsoratra Facebook sy Instagram androany maraina.
Ny lietnà governora Green dia navoakan'ny governoran'i Hawaii David Ige izay nanondro ny famerenana ny fameperana mety ho eo amin'ny fantsona. Nilaza izy fa afaka atao ny fanambarana amin'ny zoma. fNy fameperana efa niniana natao dia mety hampihena ny isan'ny olona avela hihaona, amin'ny hetsika, ny fitsangantsanganana eny amoron-dranomasina, trano fisakafoanana ary fivarotana.
Amin'ny toe-javatra ratsy indrindra dia mety hanery ny toerana hikatonany indray izany.
kitiho eto ho fanavaozana sy hianarana izay fanapahan-kevitry ny Governora Ige sy ny fepetra napetraka mba hampidina ny isan'ny viriosy.
Vaovao ratsy ho an'ny indostrian'ny fizahantany miroborobo izao ao amin'ny Fanjakana. Raha nakatona ho an'ny dia iraisam-pirenena, ny fizahantany eto an-toerana dia ambony kokoa ankehitriny raha ampitahaina amin'ny isa mialoha ny kobaidia.
Na dia mitombo be aza ny isan'ny aretina, dia ambany ny tahan'ny maty hatreto.
Tamin'ny Alahady dia olona iray no maty ary tranga 437 no voarakitra an-tsoratra, ary olona 9 hafa no nampidirina hopitaly nitondra ny fanisana hopitaly ho 2848.
Ny famintinana ny vaksinin'ny Hawaii COVID-19 farany teo dia nilaza fa dosie vaksinina miisa 1,784,678 no natolotra tamin'ny alàlan'ny fandaharam-pizarana fanjakana sy federaly hatramin'ny alahady, tafakatra 10,118 hatramin'ny zoma. Nilaza ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana fa 60.8% amin'ireo mponina ao amin'ny fanjakana no vita vaksiny tanteraka ankehitriny, ary 68.3% no nahazo fatra farafaharatsiny.
Ireo mpitsidika dia tsy maintsy mandalo ny Fandaharana Safe Safe alohan'ny avela hiditra Hawaii.
Harlan Accola hoy:
22 Aogositra 2021 amin'ny 07:41
Noho izany dia manana ny aretina mitovy amin'ny Texas ianao izay tsy mitovy amin'ny fanidiana sy ny fanaovana masking - ka mieritreritra ianao fa hitondra fiovana izany raha manomboka voafetra kokoa ianao? Angamba tokony misy mahatakatra siansa. Efa eo an-tampon'ny fanafoanana ny dia lehibe ataon'ny mpianakavintsika amin'ny volana Janoary mankany Hawaii- 20,000 XNUMX eo ho eo ny harinkarena eo an-toerana - manontany tena hoe firy ny olona hafa no mieritreritra zavatra mitovy amin'izany?
Kimberly Mele hoy:
13 Aogositra 2021 amin'ny 00:20
Andao isika rehetra hiverina eo amin'ny latabatra ary manapa-kevitra amin'ny ankapobeny hiverenana amin'ny fanasana tanana, sy fanadiovana fa vao mainka aza, mitandrina sy mitazona ny elanelana. Marina ny manamarika: makà maitso sy anana ary zava-manitra bebe kokoa amin'ny sakafo, alao amin'ny masoandro ary manaova fanatanjahan-tena. Mifampitondrà am-bavaka, ary ndao isika hiverina amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra ho fanajana tanteraka ny maha-izy azy ary hangataka amin'Andriamanitra izay naniraka an'i JESOSY Zanany ho faty ho antsika, mba hamonjy antsika koa. Raha manetry tena eo anatrehany isika, miala amin'ny làlan-kalehantsika ary mitady ny tavany, dia hihaino avy any an-danitra Izy ka hamela ny fahotantsika ary hanasitrana ny tanintsika. Ny olombelona dia manana anjara lehibe kokoa amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Andriamanitra anie hitahy an'i Amerika ~ Hawaii sy ny faritra rehetra amin'ny tany.
Andao hiara-hiady amin'ity!
Alla Bugriyev hoy:
12 Aogositra 2021 amin'ny 08:27
Tsy hanampy ny fameperana. Nikatona nandritra ny volana maro i Hawaii ary mbola velona ihany ny virus. Mitovy amin'ny virus hafa. Ny fanjaitra na ny sarontava dia tsy hahasakana anao tsy harary, ny fihinanana sakafo mahasalama ary ny fanaovana fanatanjahan-tena dia hanao asa tsara kokoa… fa raha ny marina, Andriamanitra dia manisa ny andronao, afaka lava ny fiainany. Tompom-pahefana izy ary tsy misy latsaka na dia singam-bolo iray akory raha tsy mahazo alalana aminy.
12 Aogositra 2021 amin'ny 08:19
Miorina amin'ny angon-drakitra, ny fahafantarako fa ny fiakaran'ny trangam-pitsaboana Covid dia noho ny mponina Hawaii mandeha sy mamerina izany any an-tranony.
12 Aogositra 2021 amin'ny 08:14
@ Debby - Mijanona any Amerika ?! Tamin'ny fotoana farany nanamarihako, Hawaii dia Amerika.